FITAKIAN’NY KAOMININA 500Ar : Nitroatra ireo mpitarika posy tany Toliara | NewsMada
FITAKIAN’NY KAOMININA 500Ar : Nitroatra ireo mpitarika posy tany Toliara
Niroatra nanoloana ny fanaparam-pahefana ny mpitarika posy tany Toliara.
Manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin’ny teo anivon’ny kaominina Toliara amin’ny fampandoavana hetra 500ar ny mpitarika posy any an-toerana dia nanao hetsika fanoherana izany ireto farany ny faran’ny herinandro lasa teo.
« Nanao an- diany ireo nihazo ny biraon’ny kaominina tany an-toerana ka rehefa tonga tao dia nanidy ny birao tao an-toerana. Taorian’izay dia nitaky nanolona ny birao teo izy ireo fa tsy mety aminy ilay fitakiana vola 500ar », hoy ny fampitam-baovao voaray avy tany an-toerana.
Taorian’izay, nanimba ny jiro rehetra manazava ny tànana amin’ny alina ireto andiana mpitarika posy ireto taorian’izay. Nifanarahan’ireto mpitarika posy ireto tamin’io fotoana io fa tsy hisy posy na iray aza hiasa . Noho izany, nosimbain’izy ireo avokoa izay posy mbola niasa nifanehatra taminy. Posy manodidina ny 10 teo ho eo no potika tamin’ity fitokonana nataon’izy ireo ity. Niditra an-tsehatra avy eo ny teo anivon’ny polisim-pirenena ary nanao tifi- danitra mba hampitsaharana ny fanimban-javatra nataon’ireto andian’olona ireto.
Tsy ny fandoavana hetra no tsy mety amin’izy ireo, hoy ihany ny vaovao voaray avy tany Toliara, fa ambony loatra izany raha mihoatra amin’ny vola raisin’izy ireo isan’andro ialan’ny hofan’ny posy.
Araka ny fantatra, milaza ny mbola hitokona izy ireo raha toa ka tsy miverina amin’ny fanapahan-keviny ny kaominina any an-toerana amin’ity fitakiana hetra 500ar ity.
Mbola mafampana araka izany ny any an-tampon-tànan’i Toliara amin’izao fotoana izao manoloana ity fitokonan’ny mpitarika posy ity.